Mitadiava lehilahy miray amin'ny lehilahy
Dada dadabe latabatra tsy misy dikany » Sauna »Mitadiava lehilahy miray amin'ny firaisana
Mitady lehilahy tsara dia mety ho tolona ho an'ny lehilahy maro. Mila mamantatra ny toerana hihaona amin'izy ireo ianao, ny fomba hanatonany azy ireo, ary avy eo ny fomba hahazoana sy hitazonana ny zavatra manintona azy ireo. Ho an'ny olona tsy manana fahaiza-manao ara-tsosialy tsara dia toa ny famahana piozila. Soa ihany, misy teknika azonao ampiasaina sy zavatra azonao atao mba tsy hahazoana lehilahy fotsiny fa mitazona fifandraisana matanjaka sy salama mandritra ny fotoana maharitra. Ary diniho ihany koa ny manolo-tena an-tsitrapo amin'ny fikambanana LGBTQ na tsy tombontsoa, ​​izay toerana lehibe ahafahan'ny tamba-jotra ary mety hahita lehilahy mendrika izany. Na dia manana vondron'olona mavitrika aza ny fampiharana toa an'i Grindr, Scruff ary GROWLr, ny ankamaroan'ny lehilahy dia mitady firaisana ara-nofo fa tsy fifandraisana tena matotra.
Ny toerana tsara indrindra hitadiavana lehilahy lehilahy pelaka
Fomba 3 ahazoana lehilahy iray (ho an'ny lehilahy pelaka) - wikiHow
Ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny firaisana ara-nofo dia ny firaisana ara-nofo misy ny lehilahy manao firaisana amin'ny lehilahy MSM, na manao ahoana na manao firaisana ara-nofo na ny maha-izy azy. Ara-tantara, ny firaisana ara-nofo dia malaza nifandray tamin'ny lahy sy ny lahy sy ny vavy ary ny MSM. Betsaka ny MSM anefa, tsy manao firaisana ara-nofo, ary mety manao firaisana am-bava, frôfitra na frot, na firaisana avy hatrany. Wellings et al. Manoroka mpiara-miasa amin'ny vava eo amin'ireo lehilahy manao firaisana amin'ny lehilahy hafa, ny mpiara-miasa ao anaty dia mety antsoina hoe ny tampony, ilay olona voasokitra dia mety ho antsoina hoe ambany, ary ireo izay mankafy na ny andraikitra dia azo antsoina hoe: zavatra maro.
Fomba fanaovana firaisana ara-nofo
Izaho dia freshman tany amin'ny oniversite, marika vaovao amin'ny firaisana ara-nofo, ary ireo namako rehetra, ankavia sy havanana, dia mitsidika ny fahafinaretany amin'ny dildos. Tsy ela dia vita ny fanantenanay. Nianatra tany amin'ny oniversite volana vitsivitsy taorian'ny nahavoa an'i Grindr ny fivarotana app. Nahita firaisana haingana izahay rehetra tamin'ny alàlan'ny sary masina mamirapiratra. Tao anatin'ny taona maro izay no nahalalako fa misy kilalao marobe mandeha any ankoatry ny kilalao anal, na dia izany aza ny ankamaroany, ary ny kilalao kilalao anal dia mihoatra ny fanoloana penitra.
Mitombo haingana kokoa noho ny hatramin'izay ny vondron'olona LGBT, fa mbola mety ho sarotra ny mahita lehilahy miray sy lehilahy miray aminy. Ny toerana dia misy anjara lehibe amin'ny fanamorana ny fikarohana izany. Mba hamoronana ity lahatsoratra ity dia olona 17, olona tsy fantatra anarana no niasa hanitsy sy hanatsara azy io rehefa mandeha ny fotoana.
Tags: mahita + pelaka + olona + ho an'ny firaisana ara-nofo +
aza iharan'izany lehilahy izany aho
izany no nokapohinao ny fananana phat
Zaho aloha tiako ny ampondronao ❤